अति नै मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोला ! शेयर गरेर अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोला – PathivaraOnline
Home > साहित्य > अति नै मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोला ! शेयर गरेर अरुलाई पनि पढ्ने मौका दिनुहोला
admin October 20, 2020 October 20, 2020 साहित्य	0
एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका साथ रमाउदै जिवन निर्वाह गरि रहेका हुन्छन। बिहान बेलुका श्रीमती पुजा पाठ गर्न गरेर सधै आफ्नो पतिको लामो आयु होश भनि भगवानसग प्रार्थना गर्थिन। अनि श्रीमान भने दिन भरि काम गरेर आउथे, दिन भरि मजदुरी गरेर एक नया जिबनको नया सुरुवात श्रीमतीलाई खुशि राख्ने पतिको सोच थियो।
एकदिन बिहानै केटा काममा जान्छ।तर बेलुका साझ परिसक्दा पनि फर्कदैन। श्रीमान घर नफर्के पछि केटि धेरै आत्तिन्छिन,धेरै पल्ट फोन try गर्छिन तर मोबाईल Switch Off हुन्छ , रात भरि आफ्नो श्रीमान आउने आशामा ढोकामा बसेर कुरी रहन्छिन । भोलीपल्ट बिहानको7बजे पछि केटा घर आउछ, तब श्रीमतीलाई उसले ढोकामै देख्छ।अनिश्रीमानले भन्छः किन रुदै ढोकामा बसेकि नि, आऊ उठ भित्र जाऊ ।
अनि श्रीमतीले भन्छिनः तपाई रात भरि कहा जानु भएको थियो र..?श्रीमान केहि नबोलि कोठा तिर जान्छ र सुत्छ।भोली पल्ट श्रीमतीले भन्छिनः ए हजुर!! काममा जानु हुन्न ?श्रीमान झर्केर बोल्छ कि तलाई के को मतलब!!दिन बित्दै जान्छ.. र घरमा पनि झगडा बढ्दै जान्छ ।
एक महिना पछि , केटाले केटिसग Divorce माग्छ, तर केटीले मान्दिनन ,श्रीमतीले नमाने पछि , केटाले जबरजस्ती उनलाई Divorce Paper मा Sign गर्न लाउछ।त्यसपश्चात केटाले घर छोडेर जान्छ।
पत्रमा लेखिएको थियो..
त्यसैले म टेन्सनले घर पनि गईन।म एक दिन घर नजादा त तिमी रात भरि छट्पटियौ भने म संसारबाट बिदा हुने बेला तिम्रो हालत कस्तो होला..?? म यो ससारबाट टाढा हुदैछु , सानू तर अब तिमीले आफ्नो नया जिबन सुरुवात गर्दैछौ ,म कति नै दिन बाच्छु होला र..??
उहि तिमीलाई माया गर्ने अभागीबाट अन्तिम बिदाइ!
केटी Gate तर्फ दौडन्छिन, तर केटा देखिदैन र रुदै रुदै नया जिवनको शुरुवात गर्छिन।
मोरलः साचो माया गर्ने प्रेमीहरुले आफ्नो प्यारो मानिसको भविष्य कहिल्यै खराब बनाउदैनन्। कसैलाई पाउनु मात्र साचो प्रेम हुदैन, कसैको मनमा ठाउ बनाउनु नै साँचो प्रेम हो।
(कथा सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरिएकाले सम्बन्धित ब्यक्ति नै लेखक हुन् भन्ने यकिन नभएकाले आधिकारिक श्रष्टाकाे नाम राखिएकाे छैन । कसैले मेरो हो भन्ने लाग्छ भने सिधै सम्पर्क गर्नुहाेला ।
“सुकुम्बासी बस्तीबाट उदाएका प्रतिभाशाली युवा त’स्करी रोक्न खोज्दा अस्ता ए”…